Fikirka ah in la saaro Dabka Dabka iyo Dabka Cadhada
Janaayo 11, 2020Waxaa qoray Khun Pattana
Australia, dhulka safarro badan ayaa ugu yeera janno, iyagoo hodan ku ah dabeecadda, ayaa hadda wajahaysa dab-duureedka ugu daran taariikhda. Warka naxdinta leh ayaa maalin walba baahiya. The samada cad dhalaalaya jirsado habeen iyo maalin cas halka qiiq iyo ash ku faafay hawada. Dadku waa inay xirtaan maaskaro si ay u soo saaraan gaaska sunta ah sida sheekooyinka sayniska ee ku saabsan maalinta apocalypse. Laakiin tani ma aha khayaali ah, waa dhab. Xataa ka sii daran, xayawaankii aan waxba galabsan, iyagoo dab ah, ayaa si xun u dhintay. Kaliya ku dhaafaya dabka ama la gubo, waxaan yeelan doonaa xanuun daran. Dhacdadan naxdinta leh ayaa sababtay in ka badan shan boqol oo milyan oo duurjoogta ah ay dhintaan halka kuwa ka badbaaday ay ku nool yihiin cunto iyo biyo la'aan. Ka sokow dabka dabka dabka ka kacay dhulkan, dhinaca kale ee caalamka ayaa dabka ka kacay dalka Iran ee ka dhashay dilka qofka caanka ah ee dalka uu sameeyey Mareykanka. Tani waxay soo saari kartaa dabka dagaalka.
Xaaladdu waxa ay gaartay barta jabinta oo aanay jirin meel ka baxsan iyo dib u soo laabasho. Si kastaba ha noqotee, dabka waxaa lagu demin karaa qabow iyo awoodda ugu awoodda badan - maskaxda naxariis leh. Tani waa sababta meditators ka dhan ah meesha u yimid inay Techo Vipassana Retreat Center si ay u isticmaalaan awoodda ka maskaxdooda si fiican u tababaran si ay u bogsiiyaan dunida. In hore ee geedkii Bodhi xurmaysan, in ka badan shan boqol oo xirfadlayaasha meditation in uniform cad saafi ah u fadhiistay wato sida ciidamada, diyaar u ah inay qaataan hawlgal kasta oo uu hogaaminayo Master Acharavadee Wongsakon, Vipassana Master of Techovipassana. “Caalamku waxa uu wajahayaa masiibooyin badan. Thailand oo abaar la ildaran. Wada fadhiista isla beerta tamarta waxay abuuri doontaa awood aad u weyn. Fikirku wuxuu keeni doonaa marxalado qabow oo adduunka ah wuxuuna abuuri doonaa riix dib u dhac ah si uu u noqdo waxyi, bedelida fikirka dadka. Waxaan u baahannahay inaan isticmaalno biyaha si aan u demino dabka... Tani waa qayb sax ah. Laakiin nuxurka muhiimka ah ee ku dhawaaqayo iyo faafinta raxmadda-naxariis waa in ay ma aha oo kaliya caawin doonaa naftii kuwa dhintay cabsi badan, laakiin awoodda naxariista sidoo kale abuuri doonaa midnimada iyo furi jidka dabdamiska. Waxay qaboojin doontaa qulqulka, gaar ahaan dareenka adag. Taasi waa sababta aan halkan u joogno. Our hal saac waa sidaas macno leh. Waad ku mahadsan tahay qof walba inaad halkan joogtid.” Master wuxuu khudbaddiisa ku siiyey midab jilicsan oo nasteexo ah. Hawada hadda way gariirtay, dabayshu waxay qarxisay sidii iyada oo dunida ku duubtay jacayl iyo tacsiyeeyn lahayd saddexda adduunba.
Master wuxuu sii waday cod adag, “Imaatinka qof walba waa inuu adduunka u abaalgudo. Our gariirka qaboojinta si ay u bogsiiyaan xaaladda. Ereygu wuxuu wajahayaa dhibaato weyn, sida meditator leh awood sare oo maskaxda ah, waad ku caawin kartaa. Haddii ay isbedeli karaan xudunta, dadku waxay sameyn karaan wax sax ah. "Fikirku wuxuu bilaabmay cimilada kulul ee aan dhaqdhaqaaq lahayn hawada. Jidhkaygu wuxuu ka buuxay xanuun leh jirdil aan caadi ahayn. Marka maskaxdu ay tahay tamarta hadda jirta iyo jidhku waa walxaha isku xira adduunka oo dhan, awoodda dabka dabka ayaa kordhay, oo muujinaya xiriirka heerka aasaasiga ah. Dabka gubay gudcur ku hay, oo ay taageerayaan xoogga ka Gem Triple iyo Masters oo dhan. Meydadka dhakhaatiirta ayaa ku xiran in ay gubaan sababta keentay dab-duureedka iyo dabka cadhada. Dhammaadka howlgalka, sababaha dabka oo dhan ayaa u duulay sida webi halka dhamaadka kale uu u muuqday inuu yahay bad baaxad leh oo qabow. Inkastoo dhacdadu ay ku bilaabatay dab gubanaya, haddana awoodda Vipassana ayaa si mucjiso ah u qaboojisay dunida. Ka dib markii fekerka, Master wuxuu hoggaamiyey tukashada, dhawaajinta iyo fidinta raxmadda-naxariis. hadda ee Gem Triple ku faafay aagga oo dhan. Iyadoo meditators ay ku dhawaaqayeen Maha Karuniko Katha, Master ayaa ka soo kacay kursiga keydka wuxuuna biyaha ka tuuray geedkii hore ee Bodhi. Biyaha cajiib ah oo si deg deg ah u seeped dhulka. Mar labaad iyo saddexaad, intaan biyuhu dhulka taabtaan, waxaan arkay dushooda dhulka oo kala go'ay si ay u qabtaan biyihii uu Master ku shubay maankeeda saafiga ah. Kadibna biyuhu waxay ku faafaan oo si ballaaran u seexdeen. Habeenkaas, dayaxu wuxuu ku dhalaalay iftiimeen cas oo dhiig ku daatay. Marka la eego, maskaxdayda waxay dareemi kartaa tamarta adag ee hadda jirta oo jidhkayga ku ruxay. The iftiimeen cas gudcur ku dhex jira ayaa iga dhigay inaan dareemo injineer murugo. Tani waxay noqon kartaa mid ka mid ah dhibaatooyinka dhammaan naftiinna kor u kacay hawada oo ay la socdaan nacaybka, taas oo sababtay iftiinka dayaxa si ay u muujiyaan sida hadda. Laakiin qaboojinta maskaxda naxariis leh ee Bodhisattva iyo Dhamma, dhammaan dabka ayaa la qaboojiyey. Tani waxay ugu danbeyn ka dhigay dayaxa dhalaalaysa sida dayaxa buuxa mar kale. Laga soo bilaabo xiligii biyaha saafiga ah laga shubay gacanta kan naxariista ah, wax ka yar 48 saacadood ka dib, dab-duureedka oo muddo 3 bilood ah ka gubanayay New South Wales ayaa laga maamuli karaa roobka oo mucjisooyin ku shubtay. Hawlgalkan waxaa si dhab ah u amaanay saddexda Caalamka. Waxay ahayd ergo dad yar ay ka warqabaan oo ay arkaan muhiimadda. Waxaa xitaa ka sii adkaatay in la helo qof kasta oo u huraya naxariis buuxda si uu adduunka ugu beddelo maskaxda Bodhisattva sida Master Acharavadee Wongsakon. Waxaan si daacad ah ugu sujuudaa inaan ixtiraamo Gem Triple iyo dhammaan Masters oo leh mahadnaq weyn. Waxaan si daacad ah ugu sujuudaa inaan ixtiraamo Master Acharavadee Wongsakon. Sababtoo ah adiga, bani'aadamka iyo dhammaan dadkuba waxay weli leeyihiin rajo. Waxaan ku faraxsanahay qof kasta oo ku biiray howlgalka, kuwa muuqda iyo kuwa aan la arki karin.
Turjumaad: Tarinsiri Deemongkol